Fandravana trano teny Ampitatafika Efa ela no tokony ho natao, hoy ny Ben’ny tanàna
Hala-jaza mateti-pitranga Mifono zava-miafina…
Zaza dimy na enina isan’andro no manjavona amin’ny filazana « ombay mitady » amin’ny alalan’ny tambajotran-tserasera, raha ny tatitra hita, araka ny loharanom-baovao iray (dépeche orange Madagascar) omaly.
Fanomezan-dra Ireo 20 % nanao hatramin’izay ihany no mazoto
Tsy mety mitombo mihitsy hatreto ireo mpanome ra manerana ny Nosy. Ireo 20 % efa mpanome manerana ny Nosy ihany mantsy no manome ka tsy mety manana tahiry isika.
Fetin’ny ray Maro ireo fanomezana azo hatolotra an’i Dada
Hankalazaina amin’ny alahady 16 jona 2019 ho avy izao ny fetin’ny ray amin’ity taona 2019 ity. Ho avy tsy ho ela ihany koa ny fetim-pirenena 26 jona.
CNaPS tany Vatomandry 43 indray no nofanina momba ny fiahiana ara-tsosialy
Miisa 43 ny mpampiasa sy mpiasa ao anatin’ny distrikan’i Vatomandry faritra Atsinanana nihaino sy nandray an-tsoratra ireo pitsopitsony momba ny lalàna mifehy ny asa.
Ambasadaoron’i Inde Mampirisika ny Malagasy hanao Yoga
Ny 21 jona 2014 no daty voatendrin’ny firenena mikambana ho andro iraisam-pirenena ho an’ny Yoga.
MAZAVAL RUN andiany fahatelo Hotanterahina ny 15 jona ho avy izao
Hotanterahina amin’ny sabotsy 15 jona ho avy izao ilay hetsika Mazaval Run andiany fahatelo, karakarain’ny Okalou.
Niteraka resabe teto an-drenivohitra ny faran’ny herinandro teo ny fisian’ireo trano am-polony voatery noravana teny Avaratetezana Ampitatafika ka niteraka ireo olona manodidina ny 100 isa voatery natory tamin’ny tany tsy nisy na inona na inona niaraka tamin’ny ankizy madinika.
Nitondra fanazavana mikasika izay Atoa Rado Ramparaoelina, Ben’ny tanànan’Ampitatafika omaly ka nambarany fa efa tamin’ny taona 2016 ireo trano ireo no tokony ho noravana saingy niezaka ny nangataka ny famindram-pon’ny tompon’ny tany hatrany ny tenany in-droa miantoana. Raha ny fanazavany, tsy sinoa 100 % araka ny feo mandeha no naka ny tany fa sinoa efa Malagasy any amin’ny taranaka fahadimy ary efa mizaka ny zom-pirenena Malagasy. Manana taratasy ara-dalàna izy ireo izay hitan’ny masoko mihitsy raha tsy manana kosa ireo olona nanorina trano teo amin’ilay toerana fa nipetraka fotsiny hatramin’izay. Rariny raha nalain’ny tompony amin’izay ny taniny. Rariny koa raha tsy nampandre ny fokontany sy ny kaominina ary ny zandary teto Ampitatafika ny tompon’ny tany satria mbola mety hiangavy ny tsy hanaovana izany indray aho izay mety hanakana ny tetikasa tanterahin’izy ireo. Nomarihin’ity Ben’ny tanàna ity fa ho an’ny kaominina Ampitatafika manokana, efa betsaka ireo tany vita titra sy baorina amin’ny tompony amin’izao ao aminy, antony tsy hisian’ny BIF intsony. Ho an’ireo vao hikarakara taratasy, dia olana ny faharovitan’ny boky ao Atsimondrano koa hanaovany antso avo amin’ny fitondram-panjakana.